Imikhiqizo Factory - China Imikhiqizo Abakhiqizi kanye nabaphakeli
Amanzi Futha Retort
Uhlangothi Sula Retort
I-Direct Steam Retort
I-Steam ne-Air Retort
Amanzi Futha Futhi Rotary Retort
Ukucwiliswa Kwamanzi Ne-Rotary Retort
I-Steam ne-Rotary Retort
Kuqondile Crateless Retort System
Isistimu ye-Retort Batch ezenzakalelayo
Okuqhubekayo I-Hydrostatic Sterilizer
Phindisela kabusha i-Tray Base
Ungqimba lwe-Hybrid Pad
Phindisela Ukubuyiswa Kwamandla
OKUKHETHEKILE EKUVALENI KWENZALO • Gxila ekuphakameni okuphezulu
Izinhlangothi ziphindisela kabusha
Amanzi okufafaza inzalo iRortort
I-DTS Retort Monitor interface isikhombimsebenzisi esibonakalayo se-retort, esikuvumela ...
Fudumeza futhi upholise umzimba ngokushisa, ngakho-ke umusi namanzi okupholisa ngeke kungcolise umkhiqizo, futhi awekho amakhemikhali okwelashwa kwamanzi adingekayo. Inqubo yamanzi ifafazwa kulo mkhiqizo ngepompo lamanzi nangemibhobho esatshalaliswa ekubuyiseni ukuze kufezeke inhloso yokuvala inzalo. Ukushisa okunembile nokulawulwa kwengcindezi kungalungela izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ehlanganisiwe.
Fudumeza futhi upholise umzimba ngokushisa, ngakho-ke umusi namanzi okupholisa ngeke kungcolise umkhiqizo, futhi awekho amakhemikhali okwelashwa kwamanzi adingekayo. Inqubo yamanzi ihlukaniswe ngokulinganayo kusuka phezulu kuye phansi ngepompo lamanzi ageleza amakhulu kanye nepuleti lokuhlukanisa amanzi ngaphezulu kwe-retort ukufeza inhloso yokuvala inzalo. Ukushisa okuqondile nokucindezela kwengcindezi kungalungela izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ehlanganisiwe. Izici ezilula futhi ezinokwethenjelwa zenza i-DTS inzalo ibuye isetshenziswe kabanzi embonini yeziphuzo zaseChina.
Fudumeza futhi upholise umzimba ngokushisa, ngakho-ke umusi namanzi okupholisa ngeke kungcolise umkhiqizo, futhi awekho amakhemikhali okwelashwa kwamanzi adingekayo. Inqubo yamanzi ifafazwa kulo mkhiqizo ngepompo lamanzi nangemibhobho esatshalaliswa emagumbini amane wetreyi ngalinye lokubuyisa ukufeza inhloso yokuvala inzalo. Iqinisekisa ukufana kwamazinga okushisa ngesikhathi sokushisa nokupholisa, futhi ifaneleka ikakhulukazi kwimikhiqizo egcwele izikhwama ezithambile, ikakhulukazi efanelekayo kwimikhiqizo ezwela ukushisa.
I-retort yokucwilisa amanzi isebenzisa ubuchwepheshe obuhlukile bokushintsha uketshezi lwamanzi ukuthuthukisa ukufana kwamazinga okushisa ngaphakathi komkhumbi wokubuyisa. Amanzi ashisayo alungiswa kusengaphambili ethangini lamanzi ashisayo ukuqala inqubo yokuvala inzalo emazingeni aphezulu okushisa futhi afinyelele izinga lokushisa elisheshayo elinyukayo, ngemuva kokuvala inzalo, amanzi ashisayo asetshenziswa kabusha abese eqhutshwa abuyele ethangini lamanzi ashisayo ukufeza injongo yokonga amandla.
Umugqa wokuvala inzalo oqhubekayo ongenakunqotshwa unqobe izithiyo ezahlukahlukene zobuchwepheshe embonini yokuvala inzalo, futhi wakhuthaza le nqubo emakethe. Uhlelo lunendawo yokuqala yezobuchwepheshe, ubuchwepheshe obuthuthukile, umphumela omuhle wokuvala inzalo, kanye nesakhiwo esilula sohlelo lwe-can orientation ngemuva kokuvala inzalo. Ingakwazi ukuhlangabezana nemfuneko yokuqhutshwa okuqhubekayo nokukhiqizwa kwesisindo.
Ngokwengeza ifeni ngesisekelo sokubulala inzalo, indawo yokushisa nokudla okuhlanganisiwe kuxhumana ngqo futhi kuphoqelelwa ukuhanjiswa, futhi ubukhona bomoya ku-sterilizer buvunyelwe. Ingcindezi ingalawulwa ngaphandle kwezinga lokushisa. I-sterilizer ingasetha izigaba eziningi ngokuya ngemikhiqizo ehlukile yamaphakeji ahlukile.
Isifutho sokuvala inzalo samanzi sisebenzisa ukujikeleza komzimba ojikelezayo ukwenza okuqukethwe kugeleke kwiphakeji. Fudumeza futhi upholise umzimba ngokushisa, ngakho-ke umusi namanzi okupholisa ngeke kungcolise umkhiqizo, futhi awekho amakhemikhali okwelashwa kwamanzi adingekayo. Inqubo yamanzi ifafazwa kulo mkhiqizo ngepompo lamanzi nangemibhobho esatshalaliswa ekubuyiseni ukuze kufezeke inhloso yokuvala inzalo. Ukushisa okunembile nokulawulwa kwengcindezi kungalungela izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo ehlanganisiwe.
I-retort rotary yokucwilisa amanzi isebenzisa ukujikeleza komzimba ojikelezayo ukwenza okuqukethwe kugeleke kwiphakethe, okwamanje kuqhuba inqubo yenqubo yokwenza ngcono ukufana kwamazinga okushisa ku-retort. Amanzi ashisayo alungiswa kusengaphambili ethangini lamanzi ashisayo ukuqala inqubo yokuvala inzalo emazingeni aphezulu okushisa futhi afinyelele izinga lokushisa elisheshayo elinyukayo, ngemuva kokuvala inzalo, amanzi ashisayo asetshenziswa kabusha abese eqhutshwa abuyele ethangini lamanzi ashisayo ukufeza injongo yokonga amandla.
I-steam ne-rotary retort ukusebenzisa ukujikeleza komzimba ojikelezayo ukwenza okuqukethwe kugeleke kwiphakeji. Kungokwemvelo inqubo ukuthi wonke umoya ukhishwe endaweni yokubuyisa ngokugcwalisa umkhumbi ngomusi futhi uvumele umoya ukuba uphume ngamaphayiphu omoya.Akukho ukucindezela ngokweqile ngesikhathi sezigaba zokuvala inzalo yale nqubo, ngoba umoya awuvunyelwe ukungena umkhumbi nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isinyathelo sokuvala inzalo. Kodwa-ke, kungahle kube khona ukucindezelwa komoya okusetshenziswayo phakathi kwezinyathelo zokupholisa ukuvimbela ukusonteka kwesiqukathi.
Uma i-retort yakho ikhipha umusi emkhathini, uhlelo lokuthola amandla we-DTS steam autoclave luzoguqula la mandla angasetshenzisiwe abe ngamanzi ashisayo angasebenziseka ngaphandle kokuthinta izidingo zokukhipha ukushisa kwe-FDA / USDA. Lesi sixazululo esimeme singonga amandla amaningi futhi sisize ukuvikela imvelo ngokunciphisa ukukhishwa kwefekthri.
Ibhasikidi Lenzalo Egcwele Ngokugcwele
Ibhasikidi elizinikezele lamanzi okufafaza amanzi elifanele ukuphendulwa kwesifutho samanzi, ikakhulukazi asetshenziselwa amabhodlela, amaphakheji wamathini.
Ikheli: dts industrial zone, zhucheng, ishandong province, pr china
Ucingo: +86 536-6549353